Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo $500,000 gudoonsiiyay shirkadda dhiseysa waddada Wadnaha “SAWIRRO” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo $500,000 gudoonsiiyay shirkadda dhiseysa waddada Wadnaha “SAWIRRO”
MAREEG 14 June 2016 14 June 2016
Munaasabad si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay oo uu ka qayb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale ayaa guddoomiyaha waxaa lacag dhan $500,000 (Shan boqol oo kun) oo doolarka Mareykanka ah guddoonsiiyay shirkadda dhiseeysa waddada wadnaha ee caasimadda Soomaaliya.
Munaasabadda oo ay goob joog ka ahaayeen Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, guddoomiye ku-xigeenada Maamulka Gobolka Banaadir, Hanti dhowrka guud ee dalka iyo mas’uuliyiin kale ayaa guddoomiye Madaale waxa uu is sheegay in lacagta lagu wareejiyay shirkad dhiseeysa waddada Wadnaha, isagoo inta ku daray in ay tahay lacagihii canshuuraha guryaha ee laga soo aruuriyay 17-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Mudane Yuusuf ayaa sheegay in dhismaha waddadaan ay ka qayb qaadanayaan ganacsatada Soomaaliyeed loona baahanyahay in bulshadda oo dhana gacan ka geysato dib u dhiska waddooyinka muhiimka ah u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Dhismaha wadadan ayaa qayb ka ah mashruuca dalkaaga ku dhiso hal dollaar oo uu curiyay guddoomiyaha Gobolka Banaadir mundane Sheekh Yuusuf Xusen Jimcaale, waxa dad badani ka marqaati kaceyn in mashruucan wax badan ka badalay bilicda magaalada Muqdisho.
Seminar on Commodity Price Risk Management in Kenya
Sheybaarkii dhexe ee Xoolaha Soomaaliya oo dib loo furey rubuc qarni kadib